Arzantina: ‘Ampitombointsika’ Ny Fandrosoana Sa Ny Kolikoly ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2014 12:35 GMT
“Aza mividy Pantene, fisondrotana 40% “; “Aza mividy Elvive noho ny fisondrotana tafahoatra” Sary avy amin'i @AdrianBono ao amin'ny Twitter.
Kabary iray nataon'ny Filoha Cristina Fernández tao amin'ny fahitalavi-pirenena nanambaràny fisondrotana iray vaovao amin'ny fisotroan-dronono sy ny vatsim-pianarana, ankoatra ny zavatra hafa, no niteraka valinkafatra avy hatrany teny anivon'ireo mpampiasa Twitter izay nanomboka nampiasa ny tenifototra #Aumentamos (ampitombointsika) mba hanomezany ny kaontin-dry zareo manokana momba izay ‘nisondrotra’ tao amin'ny fireneny.
Hatramin'ny nanombohan'ny taona 2014, ohatra, iray amin'ireo olana tena nandona mafy ny olona tao Arzantina ny fisondrotan'ny vidin-javatra. Miainga avy amin'ny vidin-javatra ilaina ao an-tokantrano ka hatramin'ireo fitaovana sy fiara, nisy fiovàna goavana niantraika tamin'ny toekarena amin'ny ankapobeny.
Nakarin'i casarosada ho ao amin'ny YouTube [es] tamin'ny 4 Febroary ilay kabary :
Nandritry ny kabary, notsindrian'i Cristina Fernández ny tombontsoa azo nandritry ny fotoam-piasàny :
Nampitombointsika ireo fepetra hahazoana tombontsoa: nampitombointsika ny asa, asa vaovao niisa 6 tapitrisa. Nakarintsika ny isan'ny orinasa, orinasa maherin'ny 58.000 hatramin'ny 2003; nakarintsika [ny isan'ny] ambaindain'ny indostria.
Fernández manohy hoe :
Nampitombointsika ny oniversitem-panjakana, manana sivy amboniny isika; nampitombointsika ny isan'ny sekoly sy ny efitrano fianarana […]; nampitombointsika ny isan'ny vatsim-pianarana nomena sy ny karama mba hijanonan'ireo siantifika eto Arzantina; nampitombointsika ny fampiasam-bola amin'ny siansa sy ny teknolojia; […] nampitombointsika ny fotodrafitrasa fampidiran-drano eny an-tsaha, ny asa làlana, ary ireo asa nahafahantsika nanavotra tany an-tapitrisanà hektara maro rakotry ny rano; nakarintsika ny isan'ireo teratany Arzantina nahazo rano fisotro madio sy fidiovana, ary nampitombointsika ny [haben’] ireo faritra voarary vato.
Nampiantsika maherin'ny 2,5 tapitisa ny isan'ireo mpisotro ronono, olona izay tsy nanana akory fiantohana fisotroan-dronono, ary izany no mahatonga antsika ho ny firenena manana ny fiantohana fisotroan-dronono lehibe indrindra, 93%, aty Amerika Latina; nampitombointsika ny karama […] nampitombointsika ny fividianana fanafody […]. Nampitombointsika ny fampiasam-bola amin'ny resaka trano fonenana […] Nakarintsika ny fandraisana an-tànana ireo olona tsy manana asa voarakitra ara-dalàna, izay tanatin'ny toe-draharaha manjavozavo nantsoina hoe asa ivelan'ny rafitra […]
Nilaza ihany koa izy fa nakarin'ny governemantany ny ‘fahefa-mividy’ sady nampiany hoe : “heveriko fa tsy hisy intsony Arzantina ho maty noana.”
Taorian'ilay kabary, ny fehezanteny “nampitombointsika” [es] dia nalaky lasa lohahevitra noresahana be amin'ny Twitter tao an-toerana, miaraka amin'ny fanehoankevitra momba sy manohitra azy :
Nampitombointsika ny ZAVATRA REHETRA! Kolikoly, fahantrana, fifankahalàna, ny paosin'ny manampahefana, ny tsy fahalalàna menatra, ny lainga, ny tsy fandriampahalemana, ny haren-dramatoa.
Nampitombointsika ny fahantràna, ny hetra, ny kolikoly, ny tsy fahalalàna, ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fanànana asa, ny herisetra, sns.. Ny governemanta tena mpanao kolikoly indrindra teo amin'ny tantara !
Nampitombointsika ny halatra, ny vidin-javatra, ny olona tsy manan-kohanina, ny tondradrano, ny fahafatesana. Saingy aza manahy, miteny i Cris fa tsy misy olona ho orin-javatra akory eo ( ? )
Nefa naneho ny fanohanany koa ireo izay nomba ny zava-boalazan'ny haino aman-jerim-panjakana :
Teo anilanareo izahay omaly, androany ary ho eo mandrakariva! Hasambarana sy fanompoana miaraka amin'ny vahoaka !
Fiarahamonina very tadidy izay fiarahamonina tsy manampy ny zokiolona ao aminy sy tsy manampy amin'ny fanabeazana ny ankiziny
Ny zavatra azoko lazaina anareo mikasika ny filoha mamintsika taorian'ny nihainoako azy ve? Dia ny hoe androany ary ho mandrakizay: hanohy hanohana hatrany io tetikasa io izahay !
1 andro izayEtazonia
1 andro izayArzantina
2 andro izayVenezoela
Avrily 2019 156 Lahatsoratra